Dadka Degmada Cadaado Oo Diiday in Ay Kamid Noqdaan Maamulka Galmudug iyo Xiisado Ka Jira Dhuusamareeb.
Thursday January 18, 2018 - 11:53:45 in Wararka by Super Admin
Wararka imaanaya deegaanno katirsan gobolka Galguduud ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in xiisado siyaasadeed oo u dhaxeeya mas'uuliyiinta Galmudug ay hareeyeen midnimo laga dhax sameyn lahaa maamullada Dhuusamareeb iyo Cadaado.
Waxaa labaajiyay shir ka furmi lahaa magaalada Dhusamareeb kaas oo la doonayay in lagu dhameystiro heshiis ay sanaddii lasoo dhaafay dalka Jabuuti ku gaareen kooxaha suufida Mushrikiinta ah iyo maamulka Galmudug.
Max'med Cabdullaahi Farmaajo iyo xildhibaanno gaaray magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaa ku guul darreystay in ay dhisaan hal maamul oo ka arrimiyo magaalooyinka Galguduud ee wadada laamiga ah ku teedsan.
Waxgaradka iyo siyaasiyiinta Beesha degta magaalada Cadaado ayaa diiday in ay kamid noqdaan maamul ay gar wadeen ka yihiin kooxaha Ahlusunna isku magacaabay ee sanadadii lasoo dhaafay weerarada ku qaadayay deegaannada Beeshaasi degto.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in kulan xalay ka dhacay Cadaado oo u dhaxeeyay xildhibaanno iyo wasiirro uu kusoo idlaaday guul darro kadib markii Beesha magaaladaas degto ay ku adkeysatay in ka baxayso maamulka Galmudug haddii lagu biiriyo kooxaha Suufida Dhuusamareeb iyo Guriceel maamula.
warar laysla dhaxmarayo ayaa sheegaya in haddii laba maalmood gudahood lagu qanci waayo siyaasiyiinta Cadaado uu Farmaajo ugudbi doono dhanka Caabud Waaq waxaana lagu dhawaaqi doonaa in uu fashilmay qorshihii lagu mideyn lahaa Galmudug iyo Suufida.
Dhinaca kale hal qof oo shacab ah ayaa dhintay kadib markii ciidamo katirsan maamulka 'Galmudug' ay rasaas ku fureen gudaha magaalada Dhuusamareeb, warar laga helay magaalada ayaa sheegaya in ilaalada Taardhuleed oo ah wasiir katirsan Galmudug ay si bareer ah u toogteen Nin darawal ka ahaa gaari xamuul ah.
Maamulka Hirshabelle Oo Shaaciyay deegaannada iyo Degmooyinka ay ka bixi doonaan ciidamada Burundi.